SONATA-CANTATA: နိကာယ် ၅-ရပ်အား စနစ်တကျ လေ့လာခြင်း (၂)
First of all let me say this isafantastic article. I've just started trying to understand the basics and I find this perfectly pieced as intended to be.
I just find it to bealittle confusing on the following though.
"ဤဖဿ, မနသိကာရ, စေတနာစသော ပြုပြင်စီရင်တတ်သော သင်္ခါရတရားများ (mental formations) ဟုခေါ်သည်။ အဆင်းအာရုံနှင့် မျက်စိအကြည်ဟူသော ရုပ်တရားများလည်း ဖြစ်သည်။ စံပယ်ပန်းတစ်ပွင့်အား မြင်သော အာရုံအတွေ့အကြုံတွင် ဤနည်းအားဖြင့် ရုပ်, ဝေဒနာ, သညာ, သင်္ခါရာ, ၀ိညာဏ်ဟူသော ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပေါ်သည်။"
Last of all- what is နိကာယ် - or was I just not paying attention? :-)
Thank you so much and hope to read beyond part 3.
နိကာယ်ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ တရားအစုအဝေး (collections of Buddha’s teaching) ပါပဲ။ ပိဋကသုံးပုံလို့ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ “နိကာယ်ငါးရပ် မိတ်ဆက်” http://sonata-cantata.blogspot.com/2008/11/blog-post_15.html မှာလည်း ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အပိုင်းမှာ ရှုပ်သွားလဲဆိုတာ မသေချာလို့ “ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပေါ်ပုံ”ပဲ ကိုပြန်ပြီး ရှင်းပြပါရစေ။ ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာ မြင်ခြင်း, ကြားခြင်း, နံခြင်း စတဲ့ အာရုံသိမှုတွေဖြစ်ခိုက်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေ, ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ တရားတွေကို ခေါ်တာပါ။ ဥပမာ မြင်ခြင်းလို့ဆိုရင် မျက်စိအကြည်ဆိုတဲ့ Sense organ ရှိရပါတယ် (ပြတင်း,တံခါး - ဒွါရလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်)။ မြင်စရာ အဆင်းအာရုံရှိရပါတယ်။ ဒါတွေက ရုပ်တရားတွေပါ။ မျက်စိအကြည်ကိုမှီပြီး အပြင်က အဆင်းအာရုံ visual object (ဥပမာ စံပယ်ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့ အဆင်း) ကို မြင်တဲ့ အသိစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အာရုံသိစိတ်ကို ‘၀ိညာဏ’ consciousness လို့ခေါ်ပါတယ်။
သိစိတ်ဟာ သူဟာသူ ဖြစ်တည်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ အာရုံကို သိမှုအဖြစ်သာ ဖြစ်ကြရပါတယ်။ မြင်သိစိတ်, ကြားသိစိတ်, … တွေးကြံသိစိတ်လို့ အာရုံသိမှုအဖြစ်သာ ၀ိညာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ိညာဏ်ဟာ အာရုံနဲ့ ဒွါရပေါ်မှာတင် တည်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အာရုံရွေးချယ်မှုသဘောပေါ်မှာလည်း တည်ပါတယ်။ ဥပမာ ပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာ ပန်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အနက် နှင်းဆီ, ကန့်ကော်စတဲ့ ပန်းတွေကို မကြည့်ပဲ စံပယ်ပန်းကို ရွေးကြည့်လိုက်လို့ ‘စံပယ်ပန်းကိုမြင်ခြင်း’ ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသဘောကို မြန်မာလို အာရုံပြုတယ်, နှလုံးသွင်းတယ် စသဖြင့် ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ ပါဠိလိုတော့ ‘မနသိကာရ’လို့ခေါ်ပါတယ်။
အာရုံ, ဒွါရ, ၀ိညာဏ်ဆိုတဲ့ သုံးခု ပေါင်းဆုံမိခြင်းဟာ အာရုံအတွေ့အကြုံဖြစ်မှုရဲ့ အခြေခံသဘောပါပဲ။ ဒီလိုပေါင်းဆုံမိခြင်းကို ပါဠိလို ‘ဖဿ’ လို့ခေါ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ရင် ထိတွေ့ခြင်း (contact) လို့အဓိပ္ပါယ်ရ ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် “သိစိတ်သည် ဒွါရမှတဆင့် ပြင်ပအာရုံကို ထိတွေ့ခြင်း”လို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဖဿဟာ foundation of experience ပါ။ ဖဿကိုမှီပြီးမှ အာရုံကို ဒါဟာ စံပယ်ပန်းပဲလို့ သိမှတ်နိုင်တဲ့ သညာ (perception) ဖြစ်ပါတယ်။ ဖဿကိုမှီပြီးမှ ကြည်နူးသာယာမှုဆိုတဲ့ ခံစားမှု ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။ ဖဿကိုမှီပြီးမှ “ဘုရားတင်ဖို့, ပန်ဖို့, နမ်းရှိုက်ဖို့ … ” စသဖြင့် ကြံရွယ်မှု, စေ့ဆော်မှု ‘စေတနာ’ ဖြစ်ပါတယ်။ ‘စေ့ဆော်’ ဆိုတဲ့စကားမှာ စေ့စပ်ခြင်း, ဆော်သြခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ coordination လို့နားလည်နိုင်ပါတယ်။ စေတနာကြောင့် သညာကလည်း သညာအလုပ်, ဝေဒနာကလည်း ဝေဒနာအလုပ်, ၀ိညာဏ်ကလည်း ၀ိညာဏ်အလုပ်ကို လုပ်စေနိုင်သည်။ စေတနာရဲ့ ကြံရွယ်မှု (intention) သဘောက အနာဂတ်ကို ရှေးရှုနေလို့ နောင်မှာ ၀ိညာဏ်အသစ် အာရုံသိမှုအသစ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ စေတနာက စေ့ဆော်မှု, ကြံရွယ်မှုတွေနဲ့ ပြုပြင်စီရင်ပေးနေတယ်လို့လည်း (ပါဠိလို ‘သင်္ခါရ’) ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒီလို မြင်ခိုက်, ကြားခိုက်, နံခိုက်… အာရုံအတွေ့ကြုံသိမှု ဖြစ်ခိုက်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တရားတွေကို ငါးစုခွဲကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ စံပယ်ပန်းတစ်ပွင့်ကို မြင်ခိုက်မှာ
(၁) ရူပက္ခန္ဓာ - (စံပယ်ပန်း၏) အဆင်းအာရုံ နှင့် မျက်စိအကြည်
(၂) ဝေဒနာက္ခန္ဓာ - ကြည်နူးသောခံစားမှု
(၃) သညာက္ခန္ဓာ - (စံပယ်ပန်းဟု) မှတ်သိမှု
(၄) သင်္ခါရက္ခန္ဓာ - စေတနာ, ဖဿ, မနသိကာရ, နှင့် အခြားသော ပြုပြင်စီရင်သည့် သဘောများ
(၅) ၀ိညာဏက္ခန္ဓာ - (စံပယ်ပန်း၏) အဆင်းအာရုံကို မြင်သိမှု
တွေဖြစ်ပေါ်တာကို ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရှင်းမှ ပိုပြီး ရှုတ်သွားမလား။ မေးတာတခြား ဖြေတာတခြားဖြစ်နေမလားတော့ မသိပါ။